Isithambisi sokuhlanza esithobekile singenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu zokuhlanza indlu ezisetshenziswa namuhla. Umklamo wayo olula kodwa osebenzayo uqede ukuhlanza uthuli nezinye izinhlayiya ezincane ezindaweni ezingaphezulu ngesandla, futhi kuphendule ukuhlanzwa kwezindlu kwaba umsebenzi osebenza kahle futhi osheshayo. Ingasebenzisi lutho ngaphandle kokumunca, i-vacuum isusa ukungcola bese iyigcina ukuze ilahlwe.
Manje asebenza kanjani la maqhawe asekhaya?
Indlela elula yokuchaza ukuthi umshini wokuhlanza ungawumunca kanjani udoti ukucabanga ngawo njengotshani. Uma uphuza isiphuzo ngotshani, isenzo sokumunca sidala umfutho womoya omubi ngaphakathi kotshani: ingcindezi ephansi kunaleyo yomoya ozungezile. Njengasemafilimini asemkhathini, lapho ukwephuka esikebheni somkhumbi-mkhathi kumunca abantu emkhathini, umshini wokuhlanza umshini udala ingcindezi embi ngaphakathi, edala ukugeleza komoya ungene kuwo.
I-vacuum cleaner isebenzisa imoto kagesi ephotha ifeni, imunce umoya - nanoma yiziphi izinhlayiya ezincane ezibanjwe kuyo - bese iyiphushela ngakolunye uhlangothi, ibe esikhwameni noma ebhokisini, ukuze idale ingcindezi engemihle. Ungase ucabange-ke ukuthi ngemuva kwemizuzwana embalwa izoyeka ukusebenza, ngoba ungakwazi ukuphoqa umoya omningi kangaka ungene esikhaleni esivaliwe. Ukuxazulula lokhu, i-vacuum inembobo yokukhipha ekhipha umoya ngaphesheya, ivumela imoto ukuthi iqhubeke nokusebenza ngokujwayelekile.
Umoya, nokho, awugcini nje ngokudlula bese ukhishwa ngaphesheya. Kungaba yingozi kakhulu kubantu abasebenzisa i-vacuum. Kungani? Phezu kodaka nobulwelwe obuthathwa yicutu, ibuye iqoqe izinhlayiya ezinhle kakhulu ezingabonakali ngamehlo. Uma zidonswa ngamanani amakhulu ngokwanele, zingadala ukulimala emaphashini. Njengoba kungezona zonke lezi zinhlayiya ezibhajwe yisikhwama noma i-canister, umshini wokuhlanza udlulisa umoya okungenani ngesihlungi esisodwa esihle futhi imvamisa isihlungi se-HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) ukususa cishe lonke uthuli. Kuphela manje lapho kuphephe khona umoya ukuze uphinde uphefumule.
Amandla we-vacuum cleaner awanqunywa nje kuphela ngamandla ezimoto zawo, kodwa futhi nobukhulu bechweba lokungenisa, ingxenye encela ukungcola. Ubuncane besayizi yokudla, kukhiqizwa amandla amakhulu, njengoba ukucindezela inani elifanayo lomoya ngendinyana encane kusho ukuthi umoya kufanele uhambe ngokushesha. Lesi yisizathu sokuthi izinamathiselo zokuhlanza i-vacuum ezinamachweba amancane, amancane okungena abonakala enokumunca okuphakeme kakhulu kunokhudlwana.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zokuhlanza i-vacuum, kepha zonke zisebenza kumgomo ofanayo wokudala ingcindezi engemihle kusetshenziswa ifeni, ukubamba ukungcola okumonyiwe, ukuhlanza umoya we-exhaust bese uyadedela. Umhlaba ubuyoba yindawo engcolile kakhulu ngaphandle kwabo.